Afaka Skype amin'ny Mac ve? - Skype
Tena > Skype > Skype mahazatra mac - mahita vahaolana
Skype mahazatra mac - mahita vahaolana
Afaka Skype amin'ny Mac ve?
amin'nySkypeafaka miantso namana sy havana amin'ny alàlan'ny solosainao ianao. Maimaimpoana ny fiantsoana raha toa ka misy koa ny mpiresaka aminaoSkypeampiasaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mamaky ny fombaSkypealaina sy apetraka amin'ny aMac-ka informatika miaraka amin'nyMacOS X Yosemite amin'nyMacOSSaw.6 Jul 2017.
Ao amin'ny lahatsoratro teo aloha dia mampitandrina anao aho mba tsy handrava ny Apple Silicon M1 MacBookPro, MacBook Air, na Mac mini anao.
skide resaka tsy mitory
Raha hamafana ny SSD amin'ny finoana tsara ianao dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny macOS Big Sur. Tena izany no nitranga tamiko. Mampalahelo fa misy bug izao ao amin'ny macOS na firmware izay mbola tsy namboarina.
Fa aza manahy fa misy vahaolana tsotra sy haingana amin'ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny Apple SiliconM1 Mac Ka ranomaso madio, hasehoko anao amin'ity lahatsoratra ity, tsikelikely, ny fomba nanaovana azy. Salama, Teresa avy amin'ny morgonaut.cloud aho ary manolotra fanampiana manokana an'ny Apple Mac, Windows, Linux ary Server Builds raha mila fanampiana ianao, midira fotsiny amin'ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny tranokalan'ny tranokala (eto amin'ity famaritana ity ny rohy) ary hanampy anao avy hatrany aho eo alohan'ny masonao amin'ny solosainao mandritra ny antso an-tsoratra sy ny fotoana lavitra.
Hamarino tsara fa tsindrio ny bokotra famandrihana etsy ambany ary kitiho manaraka ny lakolosy hanaovana izany ary safidio ny All Notifications mba tsy hahadino anao ny lahatsoratra ho avy rehetra ananako. Aza matahotra, fa ny fomba rehetra dia tena tsotra sy tsotra ary hasehoko anao ny zava-drehetra mivantana tsikelikely. Ka inona no ilainao.
Mampalahelo fa mila Mac hafa 'salama' ianao. Mety ho Mac, Intel na M1 tokoa io, tsy maninona. Avy eo ny hany tadiavinao dia tariby USB-C mankany USB-C.
Ianareo rehetra angamba manana ny charger Apple tany am-boalohany izay niaraka tamin'ny M1 MacBooks. Amin'ity fampisehoana ity dia hampiasa an'io tariby io aho. Zava-dehibe iray.
Ao amin'ny masinina 'biriky', mila ampidirinao ao amin'ny seranana avo indrindra izy io, ilay seranana akaiky ny efijery fotsiny. Ary ankehitriny ampifandraiso amin'ny Mac 'salama' ny faran'ny tariby. Ka eo ankavanana dia manana ilay MacBook Pro M1 biriky aho, izay averiko amin'ny fiainana ankavia, amin'ity tranga ity MacBook Air M1.
Ampidino izao ny fampiharana Apple Configurator 2 avy amin'ny Apple App Store. Rohy mivantana izay nomaniko ho anao amin'ity famaritana ity. Ary sokafy ity fampiharana ity.
Andao hakatontsika ny MacBook biriky ary mandritra ny fanombohana dia tsy maintsy manaraka ity fomba fanalahidy fanalahidy marina ity ianao. Mihainoa tsara! Tsindrio ny bokotra fanombohana ary tazomy ny bokotra. Rehefa afaka iray segondra, kitiho ihany koa ny Ctrl havia sy ny bokotra Option havia ary tsindrio ny bokotra Shift havanana amin'ny lafiny ankavanana amin'ny fotoana iray.
Ka tazomy miaraka mandritra ny 10 segondra ireo bokotra rehetra ireo, avy eo avotsory ireo bokotra rehetra, saingy tohizo hatrany ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny zoro DFU amin'ny fisehoana MacBook mahasalama. OK, indray mandeha ihany. Tsindrio ary tazomy ny bokotra fanombohana.
Rehefa afaka iray segondra, tsindrio ny Ctrl ankavia, Safidy havia, ary ny bokotra Shift havanana koa. Tazomy miaraka daholo ireo bokotra ireo mandritra ny 10 segondra, avy eo avotsory ireo bokotra rehetra fa tohizo hatrany ny fanindriana ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny zoro DFU amin'ilay MacBook mahasalama. Arahabaina, tapitra ny sarotra indrindra.
Tsindrio izao na aiza na aiza ao amin'ny efajoro DFU ary fidio ny hetsika, ary avereno amin'ny menio ambony. Ankehitriny ny installer macOS farany sy ny firmware dia alaina ary alefa ho azy ao amin'ny MacBook Pro M1 bricked. Fotoana, raha ny amiko dia naharitra 15 minitra.
Rehefa vita izany rehetra izany, ny MacBook bironao dia hamerina azy ho azy ary hoarahabaina amin'ny efijery fantsom-panafody mitovy amin'izay hitanao amin'ny fitaovana Apple rehetra ianao tamin'ny nanombohanao azy ireo. Efa nanao ny dingana mitovy amin'ny nataon'i Apple tamin'ny Manomana Mac vaovao halefa amin'ny mpanjifa. Miarahaba anao, efa azonao amboarina ny Apple Silicon M1 Mac bironao.
Azonao atao izao ny manangana an'ity MacBook ity amin'ny fikororohana, fa azonao atao ihany koa ny mamerina azy io amin'ny backup Machine Machine na koa mandahatra ny zava-drehetra avy amin'ny Mac hafa. Notsapaiko manokana ireo fomba rehetra ireo ary niasa tsy nisy olana izy rehetra. Ka, araka ny nampanantenako tany am-piandohana, tsy inona izany fa fivavahana hafa, fa tena mora.
Raha ny marina dia nampiasa ity fomba ity hanaparitahana ireo fitaovako vaovao aho nanomboka teo. Tena mahasoa ity app Apple Configurator ity, azonao ampiasaina amin'ny tranga fampiasana maro hafa, ao anatin'izany ny fitaovan'ny iOS, noho izany azoko atao ny manoro hevitra ny hamaky ireo antontan-taratasy sy hankafiziko azy. Manana ho anao ny pejy ofisialy Apple Configurator 2 Guide an'ny Mpampiasa 'Apple Support izay mifandray amin'ity famaritana ity.
Manantena aho fa nanatsara ny andronao indray aho, raha izany azafady, kitiho ny bokotra mitovy etsy ambany. Aza adino ny misoratra anarana, kitiho ny lakolosy eo akaikiny ary safidio ny All Notification mba tsy hahadino anao ny lahatsoratra ho avy rehetra ananako. Tsindrio ihany koa ny bokotra zarao ary zarao amin'ny namanao ity lahatsoratra ity mba hahafahany manampy olona betsaka kokoa aza.
Morgonaut dia eo foana ho anao :) Ary mazava ho azy aza adino ny mijery ireo lahatsoratro hafa. Ka izany no natao androany, misaotra nijery sy hahita anao amin'ny manaraka ry namako.
Maimaimpoana ve ny app Skype?
Skype-to-Skypeny resaka dia an'izao tontolo izaomaimaim-poana. Ianao dia afakaSkypeampiasao amin'ny solosaina, telefaona finday na tablette *. Ireo mpampiasa dia mila mandoa vola amin'ny endri-javatra premium indrindra toa ny hafatra am-peo, hafatra an-tsoratra na antso amin'ny laharana finday, finday na any ivelanySkype.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fampiasana Skype amin'ny Android.
Hasehoko anao aloha ny fametrahana. Avy eo dia mamorona kaonty vaovao izahay ary manamarina ireo toe-javatra rehetra azonay ampiasaina. Aorian'izany dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika miantso olona iray ary mizara ny efijery amin'izy ireo, ho hitantsika koa ny fomba hanombohana antso amin'ny kaonferansa.
Raha hametraka Skype amin'ny Android mila mahita Google Play ianao, kitiho ny Google Play mitady karazana skype tap apetraka ary miandry. Rehefa vita ny fametrahana dia tsindrio fotsiny ny Open. Aorian'ny fametrahana ny app dia ity no mila ataonao mba hamoronana kaonty.
Tsindrio izao ny Andao handeha. Tsindrio Midira na Mamorona. Eto dia tsindrio ny Mamorona.
Raha efa manana kaonty miaraka amin'i Microsoft ianao dia azonao ampiasaina hampiasaina amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaoninao na adiresy mailakao. Ho an'ity demo ity dia mampiasa mailaka aho ka hampiasaiko ny mailaka nataoko. Soraty ny mailaka Now tap NextCreate New Password Now tap Next.
Ampidiro ny anaranao sy ny anaranao. Tsindrio Manaraka, alaivo ny kaody avy amin'ny mailaka fampiharana. Mba hanamafisana ny mailaka, andao mankany amin'ny app Gmail haka ity kaody ity, eto izy.
Andao hiverina amin'ny app Skype hanoratra azy io. Kitiho ny Next. Soraty ny kaody CAPTCHA.
Kitiho ny Next. Safidio izao ny daty nahaterahana. Safidio izao ny firenena.
Kitiho ny Next. Hamafiso ny taonanao amin'ny alàlan'ny fanoratana manaraka. Afaka mahita fifandraisana mora eto ianao.
Azonao atao ny mikitika avelao na handà araka izay itiavanao azy. Kitiho ny Next. Tsindrio Avelao indray, tsindrio Manaraka, ary tsindrio Avelao hamela ny fifanakalozan-kevitra rehetra amin'ity dingana ity.
Ankehitriny ny Skype dia mifandray amin'ny kaonty vaovao amin'ny findainao Android. Andao jerena fampisehoana fohy ny fampiharana eo amin'ny ankavia havia, bokotra fampandrenesana. Kitiho eo noho izany rehefa manana fampandrenesana vaovao ianao.
avereno apetraka directx 11
Eo amin'ny ankavanana ambony dia manana safidy manasokajy ho an'ny lisitra hanananao amin'ny chat ianao. Ary koa, eto ambany dia manana ireto bokotra manaraka ireto ianao, chat, antso, contact ary bokotra chat vaovao. Azonao atao ny manamarina ireo toe-javatra ary manangana toe-javatra na sary iray amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny tapany ambony misy ny mombamomba anao.
Andao hipaoka azy io. Eto dia azonao atao ny mametraka ny satanao ankehitriny. Afaka miasa ianao, be atao, tsy eo, na tsy hita.
Raha tsy hita ianao dia tsy ho hitan'izy ireo fa mifandray amin'ny Skype ianao. Aorian'izany ny statut. Andao hanova ny toerantsika.
Eto koa ianao dia manana safidy ho an'ny mombamomba ny Skype, eto no ahafahanao manova ny anaranao, ny sary, mizara ny mombamomba anao ary manangana safidy tsiambaratelo sasany, miaraka amin'ireo safidy 'fomba hafa hahitana anao' any. Manana ny fifehezana ianao rehefa misy olona mitady ny anaranao, tsy mila mitady ianao. Ity no safidy. Azonao atao koa ny manampy nomeraon-telefaona eto raha tianao.
Ankehitriny ianao koa dia manana safidy maro ao anaty fikirana. Ny kaonty sy ny mombamomba dia saika ireo safidy mitovy amin'ilay mombamomba ny skype izay efa notadiavinay Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny manova ny fitenin'ilay fampiharana. Rehefa hita dia azonao atao ny misafidy ny lohahevitra ho an'ny Skype ary koa ny loko lehibe.
Azonao atao ny milalao miaraka aminy ary manangana azy na izany aza tianao. Ao amin'ny sehatry ny antso dia manana zavatra mahaliana toa ny Caller ID ianao. Azonao atao ny manangana olona handraisana antso avy amin'ny Skype ho toy ny avy amin'ny nomeraon-telefaoninao.
Azonao atao ihany koa ny mamela an'ity fitaovana ity hiantso an-tariby fotsiny amin'ny fifandraisana alehan'ny olona tsy fantatrao. Azonao atao ihany koa ny mamela ny safidy Subtitles Call. Tena tsara izany ho an'ny olona tsy mandre tsara.
Miaraka amin'ny hafatra dia manana safidy manokana ho an'ny hafatra ianao, tsy misy zavatra manokana, fa mahasoa izany. Amin'ny alàlan'ny fampandrenesana dia azonao atao ny misafidy fampandrenesana fanerena tianao ho raisina. Malala-tanana ny Skype ary mamela anao hisafidy izay tena tadiavinao.
Tena tsara izany. Averina indray, raha tsindrio ilay chat dia azonao atao ny manidy ny fampandrenesana mandritra ny fotoana fohy na maharitra. Ary ny safidy farany dia Contacts.
Eto no ahafahanao mampifandray ireo Contacts amin'ny telefaoninao amin'ny Skype Raha mbola tsy nanao izany ianao dia efa nametraka Skype tamin'ny findainao. Skype dia rindrambaiko tena tsara ahafahana mifandray amin'ireo namana sy mpiara-miasa aminao. Mba hanampiana ny fifandraisana amin'ny Skype dia mila ataonao izao manaraka izao.
Tsindrio ny bokotra fifandraisana eo ambany. Eo amin'ny farany ambany, kitiho ny kisary misy piraofilina sy plus. Rehefa mikaroka ianao dia mila ampiana ny anaran'ny kaonty tianao ampiana.
Manampia na manome anarana an'io olona io. Andao hitady ny ampahan'ny solonanarana, izao dia hitanao fa nahita kaonty marobe mitovy anarana aminy ny Skype. Ka rehefa manampy ny fifandraisana ianao dia zahao ny anaran'ny olona ary tsara koa ny manamarina ny sary raha misy olona maro manana anarana mitovy, ny fomba tsara indrindra hisafidianana hoe iza ny olona ifandraisanao dia ny mijery ilay sary.
Tsindrio izao amin'ny hoe Add ho an'ilay olona tianao ampiana ho mpifandray. Ilay olona nampidirinao ho mpifandray dia mila manamarina fa mahalala anao. Andraso ary ny valiny omen'ny hafa.
Raha te-hiantso olona amin'ny Skype ianao, azafady araho ireo dingana ireo, aloha ao amin'ny faritra fifampiresahana, raha efa niresaka tamin'io olona io ianao dia afaka manomboka antso mora foana ianao, raha tsy mahita ilay olona ao amin'io faritra io ianao, paompy ireo fifandraisana ary mahita ilay olona eo, kitiho ilay olona tianao hiantsoana. Ankehitriny dia manana bokotra roa eo an-tampony ianao: kisary lahatsoratra sy kisary antso. Raha te-manomboka antso an-tsoratra ianao dia kitiho fotsiny ilay kisary momba ny lahatsoratra.
Raha te-hanomboka antso am-peo ianao dia ajanony fotsiny ny sary famantarana ny telefaona. Andao hipaoka ny antso an-tsoratra. Efa mandeha ny antso ary miandry ny olon-kafa hamaly ny antso isika.
Azafady azafady raha namaly ilay antso ilay olona dia azonao atao ny mamadika na mamono ny lahatsoratra na ny audio amin'ny fotoana mety mandritra ny antso ao amin'ity varavarankely ity. Manana bokotra telo ianao, mikrô, lahatsoratra ary antso farany. Misy teboka telo eo amin'ny farany amin'ity fikandrana ity.
Kitiho eo amboniny. Eto ianao dia hahita safidy hafa toy ny: Avelao ny horonantsary miditra, alefaso ny dikanteny, ampio olona, ​​atombohy ny fandraisam-peo, ary ny efijery misaraka Manandrama manoratra izay nolazain'ilay olona. Safidy tena tsara io ho an'ireo izay tsy mandre tsara.
Raha te hitahiry kopian'ny dinika miaraka amin'ilay olona ianao dia azonao atao ny manindry Start Record. Azafady mba tadidio fa samy hahazo ny firaketana izy roa, ka avelao ny olon-kafa hahafantatra fa manoratra ny fivoriana ianao. Azonao atao koa ny mizara ny efijery amin'izy ireo raha te hampiseho zavatra amin'ny findainao ianao, ireo no Safidy lehibe amin'ny fiantsoana.
Raha te-hamorona kaonferansa amin'ny Skype ianao dia araho ireto dingana ireto. Manana safidy roa ianao hanombohana ny antso amin'ny kaonferansa. Andao hojerentsika izay hatao raha efa an-telefaona ianao miaraka amin'ny olona iray ary te-hanampy olona hafa amin'ilay antso.
Ka hanomboka hiantso olona fotsiny aho. Tsindrio ny anaran'ilay olona. Tsindrio ny bokotra Call.
Ka natomboka ny antso. Tsindrio izao ireo teboka telo eo amin'ny farany ambany havanana. Ao amin'ity menio ity, tsindrio Add People.
Safidio ao anaty lisitra ilay olona tianao ampidirina ao amin'ny kaonferansa. Mety ho olona mihoatra ny iray izy io. Raha manana lisitra lehibe ianao dia afaka mikaroka ilay fifandraisana fotsiny.
Tsindrio ity olona ity raha te hanampy raha te hanampy ny antson'ny kaonferansa izy. Raha nanisy olona tsy nahy ianao dia azonao atao ny mamafa azy ireo alohan'ny hiantsoanao azy. Tsindrio ny bokotra X eo akaikin'ny sarin'ny piraofilina.
Rehefa nanampy ilay olona tadiavinao ianao dia tapo Add. Voantso izao ilay olona ary rehefa avy nanaiky izy ireo dia atombohy ny fiantsoana ny kaonferansa. Fomba iray hafa hanombohana ny antso amin'ny kaonferansa dia ny fananganana vondrona ho an'ity fihaonambe ity Tsindrio ity bokotra ity avy eo ambany izao, paompy ny chat amin'ny vondrona vaovao Ato amin'ity vondrona ity soraty ny anaran'ny fihaonambe tadiavinao.
Aorian'izany dia safidio ny olona tianao ampiana vondrona iray. Rehefa vita izany dia kitiho fotsiny ny Vita. Ao amin'ity vondrona vaovao ity, tsindrio fotsiny ny antso avy any ambony dia hanomboka ny kaonferansao vaovao ianao toy ny antso tsotra sy fihaonambe fihaonambe, manana safidy mitovy ianao hanampiana olona maro kokoa, hizara ny efijery ary handrakitra ny fivoriana.
Tena ilaina izany. Mba hanombohana ny efijery fizarana dia mila miantso olona ianao. Andao hiantso olona ao amin'ny lisiko.
Tsindrio ny anaran'io olona io ary tsindrio ny bokotra fiantsoana eo ambony, ny antso izao dia nanomboka nipaipaika ireo teboka 3 teo amin'ny ilany ankavia, ho hitanao eto ny safidin'ny fizarana efijery, tsindrio ny fizarana efijery, izao dia hahazo fampandrenesana momba ianao ny fampahalalana momba ny tsiambaratelo, ity fampahalalana ity dia mety tsy mitovy arakaraka ny kinova Android sy ny marika findainao. Raha azonao antoka fa manomboka ny fizarana lamba dia kitiho ny Start Now. Hanomboka izao ny fizarana lamba.
Andao hojerentsika hoe ahoana izany eo amin'ny efijery an'ny hafa. Ity ny kaonty hafa izay mifandray amin'ny kaonferansa dia hahita fa afaka mahita ny efijery misy anao io olona io. Ny fampandrenesana rehetra sy ny angona rehetra dia hitan'ity olona ity.
Misy fahatarana kely amin'ny fizarana lamba, fa ara-dalàna izany. Topazo maso ny fihetsiny mba hampitsaharana ny fizarana efijery, miverena fotsiny amin'ny fampiharana Skype. Hanana bokotra eo an-tampony ianao hampiatoana ny efijery.
Tsindrio izany ary tokony hijanona ny fizarana efijery. Raha mahasoa izany azafady zarao ary misoratra anarana
Ahoana no fomba hamerenako ny Skype?
Tsindrio miaraka amin'ny kitendry Windows sy R ny fitendry.
Ao amin'ny boaty fifampiresahana Run, kitiho ny appwiz.
Skypehita ao amin'ny lisitra, tsindrio havanana ary safidio ny hamafana na mamafa.
Sintomy ary apetraka ny kinova farany an'nySkype.
Ao amin'ny pejy fanovana, kitiho ny 'Apps'.
Safidio izao 'Start up' eo amin'ny farany ambany amin'ny sidebar ankavia. Mitadiava Skype amin'ny lisitr'ireo fampiharana napetraka. Ampifamadiho fotsiny ny switch ho 'off' mba hisorohana ny Skype amin'ny fanombohana.
Tsara raha mitazona fampiharana hafa tsy ampiasainao amin'ny fanombohana mandeha ho azy koa Ity no faran'ny fampianarana ity, azafady toy ny lahatsoratra raha hitanao fa mahasoa izany ary misoratra amin'ny Foxy Tech Tips raha mila toro-hevitra sy fika Skype bebe kokoa.